ဖာပွန်မြို့နယ်အခြေစိုက် နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းတရင်း မာနယ်ပလောဒေသသို့ စစ်ကူအဖြစ်သွား | Ko Oo + Ma Thandar
« တပ်စခန်းကာရန် သစ်၊ ၀ါးတောင်းခံ
ဒီကေဘီအေနှင့် ပစ်ခတ်မှုတွင် နအဖဘက်မှ ထိခိုက်သေဆုံးမှု များပြားနေ »
ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ရက်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
This entry was posted on December 25, 2010 at 10:55 am and is filed under ဖြန့်ဝေခြင်း, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.